David de Gea oo farriin loollan ah diray kahor kulanka Manchester derby – Gool FM
(Manchester) 05 Dis 2019. Goolhayaha kooxda Manchester United ee David de Gea ayaa xaqiijiyay in kooxdiisa ay wajihi doonto Manchester City iyadoo ku jirta niyad fiican kaddib guushii ay xalay ka gaareen Tottenham Hotspur.
David de Gea ayaa aaminsan in Red Devils ay leedahay awooda ay ku garaaci karto Manchester City, kulanka Sabtida, kaasoo ka tirsan kulamada 16-aad ee horyaalka Premier League.
Manchester United ayaa u baahan doonta inay ku badiso Etihad Stadium si ay ugu tartamaan booska loogu soo baxo Champions League, iyagoo haatan ku jira kaalinta lixaad ee dhanka miiska kala sarreynta horyaalka Premier League, kaddib markii ay aruursadeen 21 dhibcood.
Yeelkeede, David de Gea ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada caalamiga ah ee “Sky Sports” wuxuu ku sheegay:
“Waxaan u meleynayaa inaan si fiican u xakameeynay kulankii Tottenham Hotspur, waxay inoo tahay guul weyn oo aan gaarnay, waana arki doonnaa hadii aan sii haysan karno isla heerkaas ciyaarta soo socota oo aan gaari karno guul”.
“Waa ciyaar qaas ah anaga ahaan, sidoo kale waa kulan muhiim u ah qof walba, waxay noqon doontaa ciyaar adag laakiin hadii aan muujino isla heerkii aan soo bandhignay kulankii Tottenham waxaan qabaa inaan heli doono fursad aan ku guuleysan karno”.